Joint statement with Amnesty to repeal 66(d) — ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကို ရုပ်သိမ်းပါ – Free Expression Myanmar
Joint statement with Amnesty to repeal 66(d) — ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကို ရုပ်သိမ်းပါ
Jun 29, 2017 by Coordinator	in News သတင်း
 ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ကို ရုပ်သိမ်းပေးရန်၊
 သို့မဟုတ် အသရေဖျက်မှုအား ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုအဖြစ် ဆက်လက်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိစေရန် သေချာစေခြင်းသာမက နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေနှင့် စံနှုန်းများနှင့်အညီ ရှင်းလင်းတိကျစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ဥပဒေဘောင်အတွင်း အခြား သိသာထင်ရှားသော ပြစ်မှုကျုးလွန် မှုများ ဖြစ်သည့် “ခြောက်လှန့်တောင်းယူခြင်း”၊ “အနိုင်အထက်ပြုခြင်း”၊ “မတရားတားဆီးဖမ်းချုပ်ခြင်း” နှင့် “ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ” စသဖြင့် ပြစ်မှုမြောက်သည့် ကျူးလွန်မှုများ ရှိခဲ့ပါက ငြိမ်းချမ်းစွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသော ထင်မြင်ချက်များအား ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် ယင်းဥပဒေအား အသုံးပြုခြင်း မရှိစေရန် သေချာစေခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို အနည်းဆုံးအနေဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း။
3. All Arakan Students' and Youths' Congress (AASYC)
8. Assistance Association for Political Prisoners – (AAPP)